मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिष्ठा र मर्यादालाई बिर्सिएर कार्यकर्ताहरु कार्यालय भित्रै नांचगान गर्दै टिकटकमा मस्त , हेर्नुहोस (भिडियो) – Classic Khabar
August 14, 2021 168
कार्यालय भनेको कुनै संस्थाको तोकियको उदेश्य हासिलगर्नका लागि जुन स्थानबाट दैनिक र भैपरी आउने कार्य सन्चालन हुन्छ त्यो कार्यलयको कुनै व्यक्तिगन निवास हुदैन । उक्त कार्यालयमा के गर्न के गर्न मिल्दैन ऐन नियम निर्देशिका समेत बनेको हुन्छ । तर बुटवलको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भने झट् हेर्दा नाच घर जस्तो देखिन्छ ।
Prevश्रीमानले आफु बसेकै कोठामा अर्की केटि लिएर आएपछि….
Nextके पुण्य गौतम प्रधानमन्त्री बन्दै छन ? पुन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यि व्यक्तिले यस्तो सम्म गर्ने – भिडियो सहित